Shiinaha iibka kulul 19 inch racking sii kordhaya UPS batari 48V 40Ah lithium ion batteriga soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | LIAO
1. 19ka rakiid ee rakibida 48V 40Ah LiFePO4 baytariga nidaamka UPS (Quudinta Awoodda aan la joojin karin)
2. Nolosha wareegga dheer: Unugga batroolka lithium ion ee dib-u-soo-celin kara oo leh in ka badan 2000 wareeg oo wareeg ah, kaasoo ah 7 jeer batteriga aashitada leedhka ah.
Qaabka Lambar CGS-F4840T
Ugu badnaan lacag joogto ah 20A
Ugu badnaan dheecaan joogto ah 35A
Cabbir 420mm * 440mm * 88±3mm
Codsiga Naqshad gaar ah loogu talagalay nidaamka UPS, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa awood-celinta, saldhigga isgaarsiinta, qorraxda＆nidaamyada dabaysha, keydinta tamarta guriga, iwm.
4. Badbaadada ugu fiican: Waa nooca batari lithium-ka ugu amaanka badan ee laga aqoonsanyahay warshadaha.
5. Bay'ada oo saaxiibtinimo leh: Iyadoo aan wasakheyn, tamarta Cagaaran.
6. Iyada oo la adeegsanayo wareegga wareegga (wareejinta), tilmaame danab / karti iyo isku xiraha Anderson ee gelinta iyo wax soo saarka.
UPS (Bixinta Awoodda aan La Go'in) Nidaamka Hordhaca:
UPS waxay u taagan tahay Quwad aan la joojin karin, oo ah koronto aan la joojin karin oo ay ku jiraan aalado keydinta tamarta ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo koronto aan kala go 'lahayn oo loo adeegsado qalabka qaar oo u baahan xasillooni koronto oo sareysa.
Markay wax soo gelinta korontada ay caadi tahay, UPS ayaa xasilin doonta dhaxe waxayna siin doontaa culeyska. Waqtigaan, UPS waa xasiliyaha danab nooca AC-ka ah, sidoo kale wuxuu ku qaadaa batteriga mashiinka; marka korontada la joojiyo (Awood koronto oo shil ah) Goorta waqtiga, UPS waxay isla markiiba u wareejisaa awoodda DC ee batteriga xamuulka iyada oo loo marayo habka beddelidda qalabka wax lagu beddelayo si loo sii wado bixinta awoodda 220V AC ee xamuulka si loo ilaaliyo hawlgalka caadiga ah loona ilaaliyo culeyska software iyo qalabka waxyeellada Qalabka UPS badanaa wuxuu bixiyaa difaac ka-badan koronto ama ka hooseeya danab.
Awoodda aan la joojin karin (UPS) waa aalad nidaam ku xirta batteriga qofka martida loo yahay isla markaana u beddelaya awoodda DC awoodda korantada iyada oo loo marayo qalabka wax lagu beddelayo iyo wareegyada kale ee moduleka ah. Waxaa badiyaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo xasilooni aan xasilooneyn oo hal kombiyuutar ah, nidaamka shabakadda kombiyuutarka ama qalabka korantada kale ee korontada ku shaqeeya sida solenoid valves, gudbiyeyaasha cadaadiska, iwm.
Hore: 19 inji kaydinta tamarta 48V lithium ion batari 100Ah saldhigga telecom
Xiga: Waxqabadka sare ee tayada wanaagsan 24V 60Ah LiFePO4 baakid batari loogu talagalay AGV